KyiMayKaung: Found poem--one elephant poacher caught,3on the run, in Ngaputaw Township, Burma--
Found poem--one elephant poacher caught,3on the run, in Ngaputaw Township, Burma--
Found poem--copied and pasted--
items confiscated whenaposse (sit kyaung) went in to raid some elephant poachers in Ngaputaw township--
included--elephant meat being smoked into jerky, elephant hides, front loading? muskets, gunpowder,acell phone,acharger.
From Facebook 7-12-2016
I used to translate found poems like these--for instance, lists (from dissident sites) of women raped by Burmese army in Shan States--I don't know if the good guys are really good here, as there is alsoalot of teak and other forest products smuggling, and I have forgotten where Ngapudaw Township is, but it sounds legit.
2015 Demo Pa Yit
July7at 5:11am ·
“ဆင်သတ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့က ညဘက်မှာ ဆင်သားတွေကို ကြပ်တင်ပြီး အိပ်မောကျနေတဲ့အချိန် ကျနော်တို့ စစ်ကြောင်းက ၀င်ဖမ်းတာ။ သူတို့ သေနတ်တွေမှာ ယမ်းအပြည့်ထည့်ထားလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက သေနတ် တွေကို ၀င်လုတဲ့အချိန် သူတို့ နိုးလာပြီးတော့ ၃ ယောက်က သေနတ်နဲ့ ပစ်နေတဲ့ကြားထဲက ထွက်ပြေး သွားတယ်။ ကျန် ၁ ယောက်ကိုတော့ သစ်တောရဲတပ်ဖွဲ့က ဒုတပ်ကြပ်က အတင်းဝင်လုံးပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့တာ”ဟု ဆင်သတ်ဂိုဏ်းဖမ်းဆီးရေးစစ်ကြောင်းတွင် လိုက်ပါခဲ့သူ ငပုတောမြို့နယ်တောအုပ် ဦးဝင်းဇော်က ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
ဒေသခံတို့၏ သတင်းပေးမှုအရ ငပုတောမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် သစ်တောရဲ ဒုရဲအုပ် ဟိန်းဇော်ထွန်း၊ ငရုတ်ကောင်းနယ်မြေ ရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ် ကျော်ဇင်အောင်၊ ငပုတောမြို့နယ် တောခေါင်း ဦးဝင်းဇော်၊ တင်းချောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းလေးနှင့် အဖွဲ့က မြစ်တစ်ရာကြိုးဝိုင်းအတွင်း ၃ ရက်ကြာ စစ်ကြောင်း ထိုးကာ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူမှာ ငဖဲမြို့နယ်၊ ငဖြူကြီးရွာသား မောင်ထားဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်အတူ ဆင်ပစ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် တူမီးသေနတ်ပြောင်းရှည် ၂ လက်၊ တူမီးသေနတ်အတွင်း ထည့်သွင်းပစ်ခတ်သည့် ဘောစိ ၃၃ လုံး၊ ကန့်မှုန့် ၅ ကျပ်သား၊ ယမ်းစိမ်း ၁၀ ကျပ်သား၊ အဆိပ်ထုပ် ၃ ထုပ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ၂ လုံး၊ ဘက်ထရီအားသွင်းစက် ၁ လုံး၊ တရားခံတို့၏ မှတ်ပုံတင် ၄ ခု၊ ဆင်အရေပြား ၁၀ ပိဿာ၊ ဆင်သားကြပ်ကင်ခြောက် ၁ ပိဿာ၊ အရှည် ၉ လက်မခွဲ လုံးပတ် ၃ လက်မရှိ ယာဖက်ဆင်စွယ် ၁ ချောင်း၊ အရှည် ၇ လက်မ လုံးပတ် ၃ လက်မရှိ ၀ဲဘက် ဆင်စွယ် ၁ ချောင်းတို့ကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း ငပုတောမြို့နယ် သစ်တောဌာနက ပြောသည်။
စစ်ဆေး မေးမြန်းမှုအရ လွတ်မြောက်နေသူ ၃ ဦးမှာ ငဖဲမြို့နယ်၊ ၀က်ဆာရွာသား ဇော်မျိုးချစ်၊ သက္ကယ်တောင် ရွာသား မောင်မော့၊ ၀င်္ဂဘာရွာသား မောင်မောင်တို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား ဖမ်းမိရေးအတွက် ဆက်လက် ဆောင် ရွက် နေကြောင်း ဆင်သတ်ဂိုဏ်းဖမ်းဆီးရေးစစ်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင် တောအုပ် ဦးဝင်းဇော်က ပြောသည်။